फेरि जोर बिजोर ? : RajdhaniDaily.com -
Home भर्खरै फेरि जोर बिजोर ?
आज प्रधानमन्त्रीसँग विज्ञको छलफल
काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं उपत्यकासहित केही जिल्लामा कोरोना संक्रमणको गति तीव्र रूपमा बढ्दै गएपछि निजीसहित सार्वजनिक सवारीमा फेरि जोर बिजोर प्रणाली लागु गर्ने तयारी गरेको छ ।
सोमबार उपत्यकामा मात्रै ५१ जनामा संक्रमण देखिएपछि प्रधानमन्त्रीले अब कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे छलफल गर्न लागेका हुन् ।
मन्त्रालयले उपत्यका प्रवेश गर्ने तीन नाका थानकोट, साँगा र फर्पिङमा १० देखि १३ साउनसम्म गरी १० हजार ८ सय २७ नमुना संकलन गरेको थियो । त्यसमध्ये करिब ३७ सय नमुना परीक्षण गर्दा २५ जनामा संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ ।
Not-to-be-missed Kumar Raut - June 30, 2020 0
काठमाडौं । अभिनेत्री सामाज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहले आफूलाई सुरुका दिनमा चलचित्रमा खानपिनमा असमान व्यबहार गरिएको बताएकी छन् । नेपाली चलचित्रमा नाताबाद कृपाबाद हुने गरेको र...
कला राजधानी समाचारदाता - March 15, 2021 0
प्रदेश १ Sushila Bishwokarma - December 30, 2020 0
Not-to-be-missed Kumar Raut - August 22, 2020 0
सम्पादकीय : हेलचेक्र्याइँ नगरी खोप लगाऔं
बिचार राजधानी समाचारदाता - March 14, 2021 0
दोस्रो चरणमा कोरोनाको खोप लगाइरहेका बेला गरिएको एक अध्ययनमा धेरै नै हेलचेक्र्याइँ भएको भेटिएको छ । सरकारले विभिन्न चरणमा विभिन्न क्षेत्र र समूहका व्यक्तिलाई...